Ny voaloboka sy ny sampana - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Ny voaloboka sy ny sampany
Tena faly aho rehefa mijery ny fonon'ity gazety ity. Tamin'ny andro fararano somary nafana ny andro dia navela handray anjara tamin'ny fijinjana voaloboka aho. Fatratra aho nanapaka ireo voaloboka masaka tamin'ny voaloboka niaraka tamin'ny hety ary nametraka azy ireo tamina boaty kely. Navelako nihantona teo amin'ny voaloboka ny voaloboka mbola tsy masaka ary nesoriko ny voankazo voaloboka simba. Rehefa afaka kelikely dia voafehiko ny filahatr'ity hetsika ity.
Betsaka ny zavatra lazain'ny Baiboly momba ny sarin'ny voaloboka, ny rantsany sy ny voany: “Izaho no tena voaloboka, ary ny raiko mpamboly voaloboka. Ny sampako rehetra izay tsy mamoa dia esoriny avokoa; ary dioviny izay rehetra mamoa mba hamoa bebe kokoa. Efa madio ianao noho ny teny nolazaiko taminao. Mitoera ao amiko, ary Izaho ao aminao. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy mijanona eo amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mijanona amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no rantsana. Izay mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy dia mamoa be; fa raha tsy misy Ahy, dia tsy mahay manao na inona na inona »(Jaona 15: 1-5).
Amin'ny maha-sampana ahy dia apetrako ao amin'ny voaloboka Jesosy amin'ny mpiasan'ny voaloboka. Na izany aza, elaela vao tsapako fa miaina amin'ny alalany aho, miaraka aminy ary ao aminy. Tamin'ny alalany no namelombelona ahy ny ranon'aina avy tany amin'ny lalina ary namatsy ny otrikaina rehetra hahafahako miaina. Ny hazavany dia manazava ny fiainako mba hahafahako hitombo endrika mitovy aminy.
Koa satria madio sy tsy voan'ny aretina ny voaloboka, dia hamoa voa tsara izy. Faly aho fa tafaray amin'ny voaloboka ho sampana salama. Aminy dia sarobidy aho ary velona.
Nasehon'i Jesosy tamiko fa raha tsy Izy dia tsy afaka manao na inona na inona aho. Mbola lalina kokoa aza ny marina. Raha tsy eo izy dia tsy manana fiainana aho ary hitondrany ahy toy ny voaloboka maina. Fa ny mpamboly divay dia maniry hitondra voankazo betsaka aho. Azo atao izany rehefa mifandray akaiky amin'ny Vine aho.
Mamporisika anao aho hieritreritra an'i Jesosy ilay voaloboka amin'ny fotoana hafa anaovanao divay iray vera, hihinananao voaloboka, na hankafanao voaloboka. Izy koa dia te hiaina anaty fifandraisana mafana miaraka aminao. Cheers!